Zvikonzero zvepamusoro zvishanu nei Ndisingashandise Rondedzero mune yega Post. | Martech Zone
Zvikonzero zvepamusoro zvishanu nei Ndisingashandise Rondedzero mune yega Post.
Chitatu, October 11, 2006 Chipiri, Gunyana 4, 2011 Douglas Karr
Ndiri kupora kubva pane zvandinotenda kuti yangu yekutanga migraine musoro nhasi. Saka ndinotarisira kuti handisi kushora neichi chinyorwa ... hachisi kurwisa, kungoda kuziva.
Kana usati watarisa blog yake pamberi, pane hupfumi hwemashoko pa ProBlogger. Zvandisingakwanise kuziva nguva pfupi yadarika ndosaka zvese posvo yega yega inofanira kuve yerimwe runyorwa?
Pane here zvakanakira kunyora muzvinyorwa zvako? Ini ndakaisa zvinyorwa mune zvangu zvemukati zvisati zvaitika, asi chete apo pandakafunga kuti vakapa gwara kana aingova mabara emapoinzi andaida kutaura. Ndinoziva kuti vanhu vanotsvaga 'Top 10' uye 'Top 100' uye zvimwe zvakajairika kuverenga zvinyorwa, asi ini handione 'Pamusoro' mune mamwe eProBlogger zvinyorwa.
Asi, angangoita ese posvo anoita kunge ane akaverengeka runyorwa rweimwe mhando. Sei?
Heano epamusoro 5 Zvikonzero nei ndisingashandise zvinyorwa mune yega yega posvo:
Izvo hazviverengi sekutaurirana.
Rondedzero dzimwe nguva dzinozviisa pasi ... munhu mumwe anogona kuve nepfungwa imwechete kana zana-mapoinzi pane chero nhaurwa yakapihwa. Nei kuverenga kuchikosha?
Kunyanya kushandiswa kwemazita akaverengwa kunonzwika sekusavimbika ... kunze kwekunge blog yako iri pamusoro pezvinyorwa, hongu.
Rondedzero yezvinhu zvinowanzo kuve zvirevo zvipfupi, uye usasiya nzvimbo yakawanda yekutsanangurwa kana hurukuro.
Dzimwe nguva, zvekupedzisira zvinhu zvinoita kunge mhando yekufunga kumusoro ... kungoedza kusvika kune kuverenga kwaunoda. Ini ndaida 5.
Tsaona… kwete foo-foo ndapota.
Yenyika Huru Yakakura RSS Bhatani? Handifungi kudaro!
Gumiguru 11, 2006 na9: 10 PM
Nice runyorwa. Heano mamwe mafungiro:
1. Ini handishandise zvinyorwa muzvinyorwa zvese - zveangu gumi ekupedzisira chete maviri chete aive akanyorwa zvinyorwa (imwe imwe yakadomwa runyorwa rwakanyorwa nemumwe munhu)
2. ndataura izvozvo - ndinofarira manyorerwo epositi. Ndinovawana vari nyore kunyora uye nyore kuverenga. Pane zvandakatumira iwo iwo rondedzero ndiwo anowanzo kuve anozivikanwa uye anonyanya kutaurwa pamusoro pawo.
3. Ndiri munhu wenyaya muhupenyu chaihwo - ndinovaita zuva rese kuti vandibatsire kuzvironga - saka ndinofungidzira kuti ndeyomuzvarirwo wekunyora kwandiri.
4. poindi yako pamusoro pezvinhu zvezvinyorwa kuva zvirevo zvipfupi ichokwadi - zvisinei zvinyorwa zvinyorwa zvandinonyora zvinowanzova nemusoro uyezve ndima shure kwavo. Mune imwe nzira ivo vakafanana chaizvo nezvinyorwa zvandinonyora nesumo yekusuma pakutanga kwendima yega yega nedudziro yazvo mumashure. Musiyano wechokwadi chete ndewekuti mapoinzi ane mabara kana manhamba uye iyo poindi yakakosheswa kuti iwedzere kugaya.
5. imwe yemabhenefiti akakura ezvinyorwa ndeyekuti iwo anokwanisa scannable. Zvidzidzo mukuverenga pamhepo zvinoratidza kuti vanhu vazhinji vanoita zvinopesana uye havaverenge mabhuru makuru ezvinyorwa uye vanoongorora zvemukati zvemapoinzi makuru vasati vadzokera kunoverenga chinyorwa. Ini ndinoona kuti iyo fomati fomati inobatsira neiyi.
6. Iniwo handisi kuita zvekutenderedza zvinyorwa kuitira kuti ndisvike kune certian nhamba uye semhedzisiro ndanyora akawanda mazita e9, 12 nedzimwe nhamba dzisinganzwisisike. Zvangu zviviri zvekupedzisira zvinyorwa zvakanyatso kutenderedzwa '10' zvinyorwa asi zvinowanda kupfuura chero chinhu - ndinonyora yangu posvo ndobva ndadzokera kunoverengera mapoinzi angu kumagumo ndonamira nezvose zvandauya nazvo.
Ehe - ndinotora zvaunotaura. Ndinoziva zvinyorwa zvinogona kuwedzerwa uye ndinozviziva - semhedzisiro ini ndinoedza kuzvisanganisa zvishoma. Kutenda nepfungwa dzako - kwete kutorwa sekurwiswa zvachose asi kutsoropodza kunovaka - ndatenda.
Gumiguru 11, 2006 na9: 25 PM
Iyi yakanaka mhinduro inondibatsira kunzwisisa zvishoma. Kana ndisina kuzvitaura ndisati ndasimba zvakakwana, ndiri fan hombe yeblog yako. Chimwe chezvinhu chandinoda nezve yako blog ndechekuti inogara ichiita kunge yepakutanga zvinhu. Sezvo ini ndichiongorora kuburikidza nezvangu zvekudya kudzokorora zvinyorwa (nhasi iGoogle Chinyorwa uye Chidimbu cheSpreadsheet chinobatana), chako chinowanzo kuve pane nhaurwa nyowani.
Kutenda zvakanyanya nekutora nguva yekupindura yangu yekupinda! Iko kunakidzwa kushanyirwa ne "ProBlogger" iye pachake.
Uye - ini ndinonyatsoda chokwadi chekuti iwe wanyora mhinduro yako. 🙂
Gumiguru 11, 2006 na10: 09 PM
ndatenda Doug - ndakafunga kuti chirevo chinodiwa kuve runyorwa 😉
Ini ndinoedza kuchengeta zvinhu zvekutanga pamusoro pePB - kunyangwe paine mazuva apo nhau dzinofanira kuvharwa ndinofungidzira.
ndatenda nemhinduro - ndinonyatsoikoshesa.